Lynda - Fikarohana momba ny marketing aminny nomerika / Satcirisu.Tk
NativeScript + Angular: Manorata iOS aplane, Android & fampiharana amin'ny Internet. Hizaha mankany amin'ny sivana - [Narrator] Ny ankamaroan'ny matihanina mpivarotra dia miditra amin'ny varotra nomerika, koa aleo mibanjina ny sasany amin'ireo loharano hita ao amin'ny Salesforce. Raha ny ankamaroany… Làlana fianarana Aoka ianao ho marika nomerika Ampiasao ny fahaizanao manadihady sy mandanjalanja mba hampivoatra sy hampivelatra fotoana vaovao ho an'ny orinasa amin'ny maha marika nomerika azy. Avy amin'ny drafi-barotra sy paikady momba ny votoaty hitarika ny taranaka sy ny SEO, io lalana io dia mitarika anao amin'ny fanao sy fitsipika tsara indrindra amin'ny marketing digital. Fianarana 7 Feb 19, 2020 - [Mpampianatra] mpifaninana ankehitriny dia miatrika fanamby sy tranga maro kokoa noho ny teo aloha. Ny Revolisiona Digital dia nitondra niaraka taminy rehetra… raha toa ka afaka manara-maso ny làlam-pifandraisana dizitaly ianao, ohatra, dia ampiasao ireo lamina tianao amin'ny media sosialy hahalalanao fa nanana andro sarotra sy tsena ianao… mipetraka eo amin'ny sehatry ny marketing digital nomerika. Ka izao no hitako teto dia tabila mampiavaka ireo fantsona samihafa amin'ny alàlan'ny fikarohana iray… Aoka ho manam-pahaizana manokana amin'ny dokambarotra Nanjary ampahany manan-danja amin'ny drafitry ny raharaham-barotra ny orinasa marketing. Manomboka amin'ny fototry ny fitomboana, mandroso amin'ny paikady fitomboana, ary mifarana amin'ireo lohahevitra ara-teknika, ity lalana fianarana ity dia manampy anao hametraka anao amin'ny sehatry ny asa amin'ny maha-manam-pahaizana manokana amin'ny dokambarotra. 8 Fitsarana Manjary Mpiasa Marketing amin'ny Internet Ny mpitantana ny marketing amin'ny Internet dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana sy fametrahana ny paikady ara-barotra dizitaly. Mianara ny fahaiza-manao ilaina sy ny fahaiza-manaonao amin'ny taktika hanombohana hamolavola sy hampihatra paikady izay afaka manampy ny fikambanano mankany amin'ny ambaratonga manaraka. 11 Fitsarana Feb 19, 2020.
NY FANDROSOAN-KEVITRA UDEMY 3.4.2 FIVORIANA VAVAKA FAMPISORIANA VOAVOTRA VOAVOLANA GUI TUTORIAL. Raha manana orinasa ianao na mpanatanteraka marketing, dia afaka manampy anao hivoatra ny lalam-barotra digital. Avy eo dia efa fantatrao fa ny marketing mailaka, ny media sosialy ary ny bilaogy dia tokony ho ampahany amin'ny paikady marketing digital. Raha tsy misy fiofanana hampisehoana aminao ny fomba ifampitampizarana ireo sombintsombiny rehetra, mety tsy ho azonao ny valiny tadiavinao. Na izany aza, ny fividianana masoivoho marketing digital dia afaka manampy amin'ny fanatanterahana ny tetika ara-barotra matotra matotra. Ny tena zava-dehibe dia izao no hidiran'ny lalam-barotra dizitaly. Manokana fotoana hianarana ny fomba sy ny antony tokony hampiasanao ny paikady ara-barotra nomerika hanatsarana ny fahatongavanao amin'ny Internet. Ato amin'ity lahatsoratra ity, mizara ny sasany amin'ireo lalam-barotra nomerika ankafizinay indrindra misy izahay. 5 amin'ireo taranja marketing marketing dizitaly tokony hofidina ankehitriny Fantaro fa ny lalam-barotra amin'ny dizitaly dia mety hidina amin'ny paikady famarotana ivelany na anatiny. Ny teny hoe fivarotana dizitaly dia tsy manavaka eo amin'ny fanerena fototra na ny fisintonana varotra - na ny fomba fidirana an-tsokosoko sy ny fomba anatiny. Vokatr'izany dia ireo fizarana ara-barotra nomerika mazàna dia mampiseho ny fomba hanosehana ny hafatrao amin'ny marketing amin'ny maha-mpijery amin'ny Internet anao araka izay azo atao. Raha oharina ny paikady miditra anaty nomerika dia manaparitaka votoaty an-tserasera izay manintona ny mpampiasa kendrena amin'ny tranokala amin'ny fanomezana vaovao na fanampiana ny tadiavin'ny mpampiasa. Noho izany, ny fivarotana dizitaly dia teny iombonana izay mamaritra ny tetika ara-barotra an-tserasera amin'ny karazana karazany. Jereo ireo akora ilaina alohan'ny hisafidianana faritra lehibe amin'ny lalam-barotra digital marketing. 1. Fanamby Google Marketing Marketing Mpianatra mihoatra ny 100 000 000 any amin'ny firenena 100 anisany no nahavita ny tolotra marketing amin'ny Google Online. Raha tsy misy fisalasalana, dia iray amin'ireo lalam-barotra digital tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Taratra an-tserasera ny fampianarana. Miditra ao amin'ny taranja daholo ny mpianatra na aiza na aiza alehany. Koa satria ny fampianarana dia misy modules izay manisy fampidirana amin'ny marketing digital, fikarohana doka, video, marketing search engine (SEM), finday, dokam-barotra anehoana ary paikady sosialy. Izy io dia iray amin'ireo lalam-barotra digital marketing feno indrindra ho an'ireo vao manomboka. Satria misy singa mifaninana amin'ny làlana dia omen'ny Google ny loka ho an'ny mpianatra tsena digital mahomby. Pros: Maimaimpoana izany. Cons: Mikasa ny hitondra ny "lalao" amin'ity fampianarana ity. Fanamby. Hosedraina ianao. 2. Fandaharam-pianarana ambony ao amin'ny Wharton University of Pennsylvania: paikady ara-barotra dizitaly ho an'ny toekarena nomerika Noho izany, raha toa ianao ka mila manangona lesona kely mandritra ny fotoana fohy, dia diniho ny Wharton. Ny Programme Executive Executive dia manolotra lalam-barotra dizitaly maromaro ho an'ny mpanatanteraka marketing sy tompona orinasa. Noho izany, ny tetikady marketing ara-barotra nomerika ho an'ny toekarena nomerika dia mifantoka amin'ny teknolojia haino aman-jery ara-barotra sy ara-tsosialy. Ny fampianarana dia manolotra ny fototry ny marketing ara-dizitaly mahomby, ao anatin'izany ny mpivarotra fihetsika izay manantena ny hamolavolana ary koa ny tetika sy paikady hampiasana ireo mpanjifa sy mpanjifa vaovao amin'ny toekarena nomerika. Wharton dia manolotra fivoriana fivarotana dizitaly roa amin'ny taona 2017. Moraina ny fandraisana andraikitra amin'ny vondrona. Na izany aza, ny fotoam-pivoriana tsirairay dia maharitra telo ka hatramin'ny efatra andro. Ny lohahevitra voasarona dia misy ny modely orinasa vaovao, ny doka an-tserasera, ny fihetseham-pon'ny mpanjifa, ny kendrena kendrena, ny analytics ary ny "contagion digital". Pros: Ny mpianatra dia mahazo fanamarinana aorian'ny famitanaana ny fotoam-pianarana. Voalamina tsara ny lalam-barotra digital marketing an'ny Wharton ary misy mpampianatra manaitra eny an-toerana hametraka ny mpanatrika mpanatanteraka. Safidy tsara ho an'ireo vao manomboka izany. Cons: lafo izany. Mitentina $ 8, 600 dolara ny fivoriana, fa betsaka ny enti-mody, nefa ny mpianatra no miasa. 3. Digital Marketing Courses, orinasa iray amin'ny LinkedIn, no safidy fampianaran-tena malaza ho an'ny mpianatra marketing digital amin'ny teti-bola. Fohy ny fampianarana tsirairay. Noho izany, ny mpianatra dia tsy maintsy manosika handray tsara ilay fiofanana ary hampihatra azy. Vokatr'izany dia manolotra lalam-barotra nomerika 54 samihafa. Ireto fampianarana ireto dia: Torolàlana media sosialy nokendrena haino aman-jery sosialy marketing fototra amin'ny marketing amin'ny Internet marketing marika fikarohana marketing digital fiaraha-mientan'ny mpanjifa marketing marketing sy fikarohana Optimization search engine (SEO) eo an-toerana lisitry ny marketing mailaka ary fampielezan-kevitra amin'ny marketing mailaka Google Plus ho an'ny asa aman-draharaha ny fandaharan'ny tetiandro fanoratana Google AdWords rindrambaiko teknolojia dokambarotra marketing mitantana vondrom-piarahamonina an-tserasera Google analytics Dokambarotra Twitter fototry ny doka marketing votoaty (sary) marketing votoaty E-varotra sy SEO mitarika taranaka ary maro hafa. Pros: Raha manana famandrihana ny kaontinao na ny mpampiasa anao, dia azonao atao ny maka maimaimpoana ireo fampianarana. Raha tsy izany dia manolotra fitsarana andrana mandritra ny 10 andro maimaim-poana. Vokatr'izany, ireo tsenim-barotra nomerika maro no mampiasa ny mianatra ny fototra ary ny mijanona amin'izao fotoana izao. Fitsapana-tena aorian'ny fianarana. Cons: Raha mila laminasa mirindra ianao dia tsy ho anao. 4. Fifandraisana tsy tapaka amin'ny media sosialy tsy tapaka Raha ny varotra marketing dia vato fehizoro amin'ny paikady marketing digital, eritrereto ny fizotran'ny haino aman-jery sosialy amin'ny Media Media Quickstarter avy amin'ny Constant Contact. Miankina amin'ny fomba fampidirana ireo serasera mailaka sy ny marketing ara-tsosialy ny fampianarana. Vokatr'izany, ireo lesona dia mifantoka amin'ny paikady fivarotana dizitaly ho an'ny Google Plus, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, bilaogy, tranonkala famerenana ary lisitra an-tserasera. Ny fampianarana dia mety amin'ny tsena vaovao nomerika. Pros: Tsara ny fitari-dalana sy ny glossaries an'ny mpampiasa. Ny fianarana foana dia misy fomba azo ampiharina amin'ny fomba fampiasana ny atin'ny lesona. Ilaina ny fitsirihan-tena. Cons: Raha manana traikefa amin'ny haino aman-jery nomerika ianao dia mety tsy ho sarotra aminao io làlana io. 5. Ny diplaoma maimaim-poana alison Open Alison amin'ny E-Business Alison dia loharanom-pahalalana an-tserasera matanjaka miaraka amin'ireo mpampiasa an-tapitrisany izay voasoratra anarana. Manome fampianarana voamarina sy fenitra mifototra izay maimaimpoana avokoa. Alison dia nambara fa MOOC voalohany - mpamatsy fampianarana misokatra amin'ny Internet an-tserasera. Raha mitady safidy maimaim-poana sy fanamarinana e-fandraharahana ianao, ny diplaoma amin'ny E-Business dia lalam-barotra dizitaly izay manorina fitadiavana fikarohana, fikarohana marketing, Google Analytics-AdWords, fandrefesana dizitaly, fanaraha-maso ny fampielezan-kevitra, ary famakafakana fizahana vola azo. fahaiza-manao. Pros: Ny fampianarana dia hampianatra anao ny fomba hampiroboroboana orinasa an-tserasera, hanatsarana ny pejin'ny pejin-tranonkalanao hanatsarana ny fiovan'ny mpanjifa, ny fampiasana ireo fitaovana toa ny Google Webmaster, Analytics, AdWords, ary AdSense. Cons: Na dia omena lalana ho an'ny vao manomboka aza ny làlana dia mety ho sarotra ihany ny mitandrina. Hisy ny fitsapana hahazoana ny fanamarinana. Famintinana Ho fehiny, ny tsy fahampian'ny fahaizana amin'ny marketing ara-dizitaly no antony voalohany tsy ahombiazan'ny ezaka varotra marketing nomerika. Ilaina ny fahatakarana ny fironana ara-barotra dizitaly ankehitriny. Ny fampianarana momba ny haino aman-jery nomerika dia tena ilaina ho an'ireo vao manomboka. Ny fironana mihetsika ary mivelatra haingana eo amin'ny tontolo digital. Raha toa ianao dia olona tena vaovao na manana fahaiza-manao marketing amin'ny dizitaly izay mitaky fanavaozana, mampiasà hanohy ireo fanao tsara indrindra amin'ny fisoratana anarana amin'ny lalam-barotra digital marketing. Ahoana ny niainanao amin'ireo lalam-barotra digital? Zarao eto ambany ny eritreritrao. SORATRA SORATRA: 1, 2.
همانطور که میدانید داده ها در بازاریابی نقش اساسی بازی می کنند چرا که داده ها به ما نشان میدهند, کجا هستیم, می خواهیم به کجا برسیم و چه مسیری را باید طی کنیم و مهمتر از همه آیا در مسیر درست قرار داریم یا نه? برای بازاریابی و یا مارکتینگ دیجیتال هم وضع از همین قرار است. ا مس ا ا ایییییم کسککییییییی ی عنوان اصلی: Marketing Analytics: Manolotra Data Data An-tserasera Digital amin'ny alàlan'ny CD amin'ny alàlan'ny fampitana ny CD amin'ny alàlan'ny fidirana an-tsary. ر Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Introduction Introductionر Introduction Introduction ا Tatitra famoronana: Fotodrafitrasa sy singa Fanolorana ny angona mpikaroka amin'ny alàlan'ny firaketana horonantsary Karazan-kevitra sy loharano handinihana Fomba mora misy amin'ireo rafi-drafitra 2. Manomana ny fampahalalana nomerika Fampisehoana: Famaritana ny angon-drakitra sy zava-misy Ahoana ny fampiasana teny fanodinana Visualization ao anatin'ny Google Analytics Ahoana ny fanoratanao mpanatanteraka tsara famintinana 3. Fampisehoana tatitra momba ny varotra nomerika Ny famintinana mpanatanteraka Fampidirana ho an'ny tatitra Fizarana fikarohana sy fizarana Fizarana momba ny tatitra Ny famaranana ny tatitra 4. Fitaovana fanampiny sy loharano ivelany Lohalaharana: Alexa sy Similarweb Mampiasa Tableau mba hanatsarana tatitra Manintona aingam-panahy avy amin'ny hafa Famaranana veloma مشخصات این مجموعه: زببآآآآزز 51آوگ 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 محصول موسسه آموزشی Lynda.
Fototry ny varotra: Fikarohana varotra (2015) dia ianarahan'ny LinkedIn! Raha te-hiditra taranja indray, azafady miditra amin'ny LinkedIn Learning Ny atiny rehetra fantatrao sy tianao Manampy, torolàlana momba ny laminasa manokana natao ho anao Ny fidirana mitovy amin'ny tantaran'ny fianaranao Lynda sy fanamarinana rehetra Manandrama maimaimpoana amin'ny fianarana LinkedIn Hizara navigateur Famintinana amin'ny làlana Transcript Hizaha ny offline Navoaka 4/15/2015 Fantaro amin'ny mpanjifa amin'ny ambaratonga lalina kokoa - tsy amin'ny stats fa amin'ny olona - miaraka amin'ny fikarohana marketing. Ny manam-pahaizana Cheryl Ladd dia mampiseho ny fomba ahalalana sy hampiasana ny fomba fikarohana tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny foto-kevitra. Mametraka ny fototry ny saina ho amin'ny fahazoana ny sehatry ny fikarohana momba ny varotra sy ny andraikiny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, alohan'ny hanazavana ny fizotrany: ny zava-drehetra amin'ny famaritana ny fomba marina amin'ny famaritana ireo fomba fanangonana data. Ilay fizarana ihany koa dia mibaribary ny fomba fivoaran'ny fikarohana momba ny fivarotana vokatra ary mamantatra ireo mety ho fahatafintohinana sy fiheverana etika rehefa manao fikarohana tsena. Lohahevitra ny lohahevitra: Fantatra ny fitadiavana ny tsena Famahana ny fomba fikarohana Fahatakarana ireo karazam-pikarohana: azo itokisana amin'ny habetsahana Mametraka fanontaniana Manangona data Fakafakao data Manomana tatitra Famantarana ireo olana mety hitranga amin'ny fikarohana momba ny marketing Tohizo ny fanombanana Tany aloha no nanombohanao ity fanombanana ity ary tsy nahavita izany. Azonao atao ny misintona izay nafoinao, na manomboka manomboka. Atombohy ny volako maimaimpoana Atombohy amin'ny fianaranao LinkedIn ny volana maimaim-poana, izay manatrika fampianarana 100% izao. Mivoarana fahaiza-manao fangatahana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo lalam-pamolavolan-tsofina mpitarika an'arivony momba ny lohahevitra momba ny fandraharahana, teknolojia ary famoronana. Mivoaka ianao izao ary haverina ho azy ireo eo amin'ny LinkedIn Fianarana ny fidirana amin'ny atiny fianaranao.
Ianaro ny fomba hamolavolana sy hampiharana ary handrefesana paikady ara-barotra mandresy amin'ny alàlan'ny fitaovana sy sehatra ankehitriny. Ny lalam-barotra varotra eto aminay dia manampy anao hahay fahaizana hazakazaka ara-barotra nentim-paharazana sy ny fitaovana maoderina farany indrindra - hianatra ny zava-drehetra amin'ny fanaovana marika sy ny fifandraisana ampahibemaso ho an'ny SEO, PPC, analytics web ary marketing ara-tsosialy. Atombohy ny volako maimaimpoana Jereo ny taranja marketing 884 Courses 18, 504 Video Tutorials Fidirana tsy manam-petra Fidio izay tianao ho fantatra avy amin'ny tranomboky be dia be anay. Mpampianatra manampahaizana Mianara avy amin'ireo manampahaizana momba ny indostria izay tia fatratra fampianarana. Zahao ny fampianarana feno amin'ny LinkedIn Learning Ny 100% ny votoatin'i Lynda dia eo am-pianarana LinkedIn. Mahazoa fidirana tsy voafetra ho an'ny taranja 6 000 000, ao anatin'izany ny torohevitra manokana. Atombohy ny volako maimaimpoana.